U-Andrei Malakhov wahlala isikhathi eside, engabhalisi ekuxhumaneni nomphakathi. Ngesonto elidlule, umethuli odumile wafika nomkakhe uNatalika Shkulova ukuba bahlale eFrance futhi behluleka ukumelana. Ngemva kokunciphisa ukuncenga komngani wakhe uNicky Belotserkovskaya, u-Andrey Malakhov waqala ikhasi lakhe siqu ku-Instagram.
Umethuli we-TV akazange alindele ukuthi kuyoba ethandwa kakhulu. Ngaphezulu kweviki, abasebenzisi abangaba ngu-150,000 babhalisele i-microblog yakhe. Ngaphezu kwalokho, ngokoqobo konke okuthunyelwe eMalakhov Instagrams manje kuqoqa amashumi ezinkulungwane "okuthandwa", futhi ama-Fallovers alindele ngokulangazela izindaba zakamuva ezivela esithombeni sabo. Iyini imfihlo yokuphumelela komethuli "Masixoxe?".
Kulula kakhulu - abalandeli beNethiwekhi bamangala ngamafomu amahle womethuli we-TV. Izitshalo ezivamile zebhizinisi, lapho umbukiso obonakala khona esikrinini sethelevishini, akazange anikeze ithuba lokubuka isibalo sakhe semisipha ehlakaniphile.
Kodwa izithombe namavidiyo avela kulo lonke elaseFrance livuliwe ngokuphelele u-Andrei Malakhov, owakhiwa ngokushesha "uphawu lwezocansi lwe-Instagram": "
U-Andrey Malakhov ehhashi elimhlophe wavusa ukubonga okuvela kubalandeli
Kusasa namhlanje kuye kwahlangabezana nokulindelwa kwabalandeli abaningi besifazane bomholi wobulili. U-Andrei Malakhov ku-Instagram wakhe wabeka isithombe esisha, okuvela kuso ababhalisile bakhe.
Isivakashi se-TV sivakashele iCamargue Nature Park, esiseProvence. Le ndawo idume ngamahhashi ayo ayingqayizivele amhlophe. Ngenye yamahhashi amahle, umethuli odumile wathunjwa. Isithombe esisha u-Andrey Malakhov ukhulume nalabo asebekhulile kakade:
Ngesicelo sakho - isithombe se-18 + »
Emibhalweni, abalandeli bashesha ukuveza intshiseko yabo no-Andrei Malakhov. Umethuli washeshe wabhapathizwa ngokuthi "isikhulu ngehhashi elimhlophe", "i-Gascon", "indoda enhle", "macho", "cowboy", njll.
Imidiya: Inkosikazi yomculo odumile ayizange isuke kumkhuhlane
UPaulina Andreeva akhathazeki ngenxa yokuma kwezindlebe zakhe
U-Alina Kabaeva uvele emphakathini ngesineke sokubandakanya
I-rice crêpes ne-saumon
Ukudweba kanjani i-shellac?
Izifo ezihlukene zezingane ezincane
Amazambane aphekwe ngama-Herbs ase-Italian
Ukufunda ngaphandle kokucindezeleka
Ukuqothulwa kwe-IVF okuphephile
Inani elivamile lamafutha emzimbeni
I-Class Class: Weaving
Ungamshayela kanjani umuntu uhlanya?